Ukuphupha ngekona Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Ngokukhawuleza xa umgca ochanekileyo ujija, ikona yenziwe. Kodwa ikona ayimelwe kuphela kwijiyometri, kuba zonke izakhiwo zomhlaba zinokuba nekona elinye okanye nangaphezulu. Ngaphandle kweekona zezindlu kunye neekona zezitalato, kukwakho nabantu ekuthiwa banemiphetho erhabaxa. Kweliphi ikona lehlabathi lamaphupha kuboniswa elona phupha lichanekileyo.
Ngaba ikona nayo ivele kuwe ephupheni? Ukuba kunjalo, ungasitolika isiganeko sephupha ngoncedo lwamaphupha ethu aqhelekileyo malunga nesimboli, kunye nokutolikwa ngokubanzi, kwengqondo kunye nokomoya wephupha:
1 Isimboli yephupha «ikona» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
1.1 Ujikeleze ikona, yintoni ebangela eli phupha?
2 Uphawu lwephupha «ikona» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «ikona» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «ikona» - ukutolika kokomoya
Isimboli yephupha «ikona» - Awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli
Ujikeleze ikona, yintoni ebangela eli phupha?
Umfanekiso wephupha "ngekona" luphawu olunokubonakala ngeendlela ezininzi. Ukuba iphupha lijikile kwikona ngasekunene, inokuba isebenza ngokufanelekileyo. Ukuba ulwalathiso lushiywe ngasemva, intuition yakho ihlala isisigqibo xa usenza izigqibo. Umntu ophuphayo ngengqondo engumzekeliso uzise umntu ngekona, oko kukuthi, ubulele, ungafuna ukwahlukana nefuthe lomntu othile ekuvukeni ubomi?
Uphawu lwephupha «ikona» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba iphupha libona ikona, indlu yekona okanye ilitye lembombo kuyo el mundo yamaphupha, ke oku kuhlala kuyinto uphawu oluqinisekileyo. Ukuphupha kuya kuba neenzuzo kwaye okoko ungaphumi kwikona awuyi kuchaphazeleka ziingxaki kunye nezithintelo eziphazamisayo.
Ukutolikwa kwephupha kufuneka kujongwe ngokungalunganga ngakumbi ukuba iphupha lifuna ukuzifihla ekoneni ngelixa ulele okanye uzimele. Ukuba uloyiko olukhulu lukuqhubela kule kona, yoyikisa ngexa elizayo ubunzima obukhulu kunye neengxaki kwihlabathi lokwenza iwotshi.
Ukuba kwihlabathi lamaphupha abanye abantu badibana ukuze baxoxe ekoneni, ke oku kuyacaca isilumkiso xa uphupha. Kufuneka ulumke kakhulu kwilizwe labalindi kuba uneentshaba ezifuna ukukwenzakalisa. Nokuba umhlobo ekucingelwa ukuba angaba ngumngcatshi.
Ukuba umntu ubona ephupheni unxibelelwano lwediagonali yeekona zepoligoni, oko kunokuqondwa ukuba kuthetha ukuba umphuphi kufuneka akhethe ukucinga kwakhe okuqiqayo.
Uphawu lwephupha «ikona» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokwenkcazo yengqondo yamaphupha, ikona yelizwe lamaphupha ihlala inenye. inkalo efihliweyo. Ukuba umphuphi uhleli ekoneni, akafuni kubonwa. Mhlawumbi uzama ukufihla into kwabanye abantu phaya.
Kule meko, ikona inokuba yiyo Ukubaleka uphawu phambi kwenyani, kuba ngamanye amaxesha iphupha lizama ukurhoxa kwikona lehlabathi lokwenyani.
Ukuba ikona ibonakala kwilizwe lamaphupha, isenokuba ukulungiswa Bhengeza kubomi babaphuphi. Kuyinyani ukuba kwikona ayisiyonto eguqukayo, kodwa iphupha liya kuthatha isigqibo sokujika kwaye lithathe indlela eyahlukileyo.
Kuphando lwamaphupha, indlela iphupha eliyithathayo ikwabalulekile. Ukuba ujika ikona iye ngasekunene, izenzo zakho zilawulwa yingqondo yakho. Ukuba ujika ngasekhohlo, wenza ngokungathandekiyo, ngokusekwe kwi "silika."
Ukuba iphupha eli lidibana nekona xa ujika kwaye ungqubana, iya kuba yinto ekhubekisayo kwindawo ethile ebomini bokuvuka kwaye ivezwe kugxekwa.
Uphawu lwephupha «ikona» - ukutolika kokomoya
Ikhoneni lithetha ekutolikeni ngephupha lokomoya ukuba iphupha alithandabuzeki kwaye linye umbono omtsha iimfuno.